AnkerWork B600 a webcam maka nkwanye na telecommuting [Nlebanya] | Ngwa akụkọ
AnkerWork B600 igwefoto webụ maka mgbasa ozi na telecommuting [Nlebaanya]
Miguel Hernandez | 01/05/2022 18:00 | General, Nyocha
Anker na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji nye ọtụtụ nhọrọ na nhọrọ n'ụdị ngwa maka ụdị ndị ọrụ niile, ma ọ bụrụ na chaja MagSafe, ngwaọrụ na n'ezie, na kamera weebụ, otu n'ime alaka ya ebe ọ na-egbuke egbuke maka nhọrọ na àgwà ha na-enye, Ọ bụ ya mere na oge a anyị na-alaghachi na fray ọzọ na ngwaahịa nke ụdị a.
Anyị na-enyocha n'ime omimi nke AnkerWork B600 kamera weebụ, ngwaọrụ emebere maka teleworking na nkwanye, nwere ọkụ, igwe okwu na ọkà okwu. Agbagharala ya n'ihi na edobere ya dị ka ihe ọzọ na-atọ ụtọ iji kwalite nrụpụta gị.
3 Nwụnye na customizable software
4 na-eji kwa ụbọchị
Igwefoto Anker ọhụrụ a na-eketa imewe akụkụ anọ nwere akụkụ gbara okirikiri nke anyị na-ahụ na ngwaọrụ ya gara aga. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na, dị ka ọ dị na "unboxings" Anker ndị ọzọ, a na-ahụta àgwà ahụ site na oge mbụ na ọkwa ụlọ, ọbụna na ngwa ndị dị ka eriri. Anyị nwere akụkụ azụ ebe anyị na-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri USB-C abụọ, dị mkpa maka ike na nnyefe onyonyo, yana ọdụ ụgbọ mmiri USB-A ga-arụ ọrụ dị ka ọdụ ụgbọ mmiri.. Maka akụkụ nke ya, a na-eji textile eme gburugburu gburugburu, iji mee ka ụda nke ndị na-ekwu okwu ejikọta ya n'ụzọ ziri ezi.
Anyị nwere ntọala mkpanaka nke na-enye anyị ohere ịgbanwe kamera weebụ n'elu ihuenyo ọ bụla, na anyị nwekwara ike dabara na ala ala ụdị ọ bụla nke ọkọlọtọ nkwado maka ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ese foto, ọ bụNke a bụ nhọrọ m họọrọ ebe ọ bụ na agaghị m ejikọta ya na ihuenyo kpamkpam.
Akụkụ dị n'ihu bụ maka ọkụ ọkụ nke na-emepe na mgbanaka ma na-echebe oghere. N'akụkụ anyị nwere bọtịnụ mmetụ abụọ maka igwe okwu na ọkụ, ihe anyị nwekwara ike ịchịkwa site na ngwa ahụ n'onwe ya.
Igwefoto a nweren 2K kacha mkpebi ihe mmetụta ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịgbanwe ya dị ka mkpa anyị si dị, ee, na ike nke Foto 30 kwa nkeji, ọ bụ ezie na ọ bụghị na anyị chọrọ ka anyị rụọ ọrụ ma ọ bụ iyi. The sensọ size bụ 1 / 2.8 sentimita asatọ na ọ nwere akpaka ikpughe usoro, akpaka na-acha ọcha nguzozi usoro, akpaka-elekwasị anya na onye nchọpụta na nsochi ọrụ, ọ dịghị ihe ọzọ na ọ dịghị ihe na-erughị.
N'aka nke ọzọ anyi nwere igwe okwu bidirectional anọ yana igwe okwu abụọ nke 2W nke ọ bụla inye ụda stereo doro anya ma a bịa na mkparịta ụka, ha niile nwere Kagbuo Echo Auto yana n'ezie kagbuo ụda maka oku, na-enye ohere ka ịnụ naanị olu. Anyị kwubiri na AnkerWork B600 a kwadebere nke ọma na ọkwa teknụzụ, n'agbanyeghị na anyị ga-ekwu maka ịrụ ọrụ ya ozugbo.
N'ezie, Anker AnkerWork B600 a bụ Ikwunye & Gwuo, site na nke a ka m na-ekwu na ọ ga-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi naanị site na ijikọ ya na ọdụ ụgbọ mmiri USB-C site na kọmputa anyị. Usoro ọgụgụ isi ya na ikike autofocus kwesịrị ezuru anyị kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịnweta ngwanrọ nkwado, na nke a anyị na-ekwu maka ya AnkerWork na ị nwere ike ibudata n'efu, n'ime ya anyị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ, mana ihe kachasị mkpa bụ ohere nke imelite sọftụwia igwefoto wee si otú a na-agbatị nkwado ya.
Na ngwanrọ a anyị ga-enwe ike ịhazigharị akụkụ nlele atọ nke 68º, 78º na 95º, nakwa dị ka na-ahọpụta n'etiti atọ kpọọ àgwà n'etiti mkpebi dị iche iche aga site na omume nke ukpụhọde fps, rụọ ọrụ ma deactivating na-elekwasị anya, na HDR na a Ọrụ mgbochi Flicker na-adọrọ mmasị mgbe anyị na-enwu site na ọkụ ọkụ LED, ị maara na n'ọnọdụ ndị a flickers na-apụtakarị nke nwere ike iwe iwe, ihe anyị ga-ezere nke ọma. N'agbanyeghị ihe niile, anyị ga-enwe ụdị ndabara atọ dabere na mkpa anyị nke na tiori na-enweta ọtụtụ ihe na Anker's AnkerWork B600.
Anyị na-akwado gị na ihe omume ị kpebiri na igwefoto a dị na weebụsaịtị Anker na Amazon, na ị na-eme ngwa ngwa ịwụnye Anker Work wee were ohere iji melite firmware nke igwefoto.
na-eji kwa ụbọchị
Igwefoto a emeriela ihe nrite abụọ na CES 2022 ma ọ bụ kpọmkwem n'ihi na anyị na-eche ihu "All-in-One", ngwaọrụ nwere ike ibelata ọnụ ọgụgụ "clunkers" anyị nwere na tebụl anyị maka ịkpọkọta ha niile. otu otu. Na mgbakwunye, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na mpaghara niile, n'ụzọ dị otú a, Ọ bụrụla igwefoto ndabara anyị maka Podcast akụkọ iPhone kwa izu ebe anyị na-ekerịta ozi gbasara ihe omume ugbu a na ụwa teknụzụ n'ozuzu.
Nke a bụ ebe o gosipụtara ikike ya, ọkachasị maka sistemụ ọkụ ọkụ LED ya na anyị ga-enwe ike gụchaa n'etiti ụda oyi na nke na-ekpo ọkụ, ebe ọ bụ na nke a anyị kwurula bụ kpọmkwem ihe ọkụ ọkụ ejiri.
Igwefoto nwere VoiceRadar Ọ bụrụ na anyị kpebiri iji igwe okwu ya, nke a abụghị ihe ọzọ karịa usoro nkwụsị ụda nke mpụga nke na-eme ka arụmọrụ nke oku ahụ doo anya na na ule anyị egosiwo na ọ dị irè nke ukwuu n'iwepụ ụda azụ na ilekwasị anya naanị na ndị na-emekọrịta ihe. .
Na mgbakwunye, igwefoto nwere usoro naanị etiti, nke na-abụghị ihe ọzọ karịa kpọmkwem nsochi nke onye ahụ, na-edebe ha mgbe niile n'ihu. N'ime ule anyị, egosila na ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na ọkwa elekwasị anya na ntinye n'onwe ya, ihe anyị chọpụtara na mmepe nke ọrụ.
ị nwere ike iji AnkerWork B600 na-amalite na euro 229 na webụsaịtị Anker, ma ọ bụ ozugbo site na Amazon, ọ bụ ezie na ị ga-ahụkwa ya na ụfọdụ ihe a na-ahụkarị nke ire ere.
N'ụzọ dị otú a, edobere dị ka otu n'ime igwe foto niile zuru oke na nke bara uru na ahịa yana na Actualidad Gadget anyị enweghị ike ịme ihe ọ bụla karịa ịkwado ya.
Ihe na: Mee 1 nke 2022
Mgbanwe ikpeazụ: Mee 1 nke 2022
Versatility na atụmatụ
Kwesịrị ịgụnye ihe mgbakwasị ụkwụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » AnkerWork B600 igwefoto webụ maka mgbasa ozi na telecommuting [Nlebaanya]
Na-achọ na PDF